Apache Guacamole: shandisa komputa yako kubva chero kupi | Linux Vakapindwa muropa
Apache Guacamole: shandisa komputa yako kubva chero kupi
Kune akawanda mapurogiramu ekugona kuwana komputa kubva chero kupi zvako pasi neine chete netiweki yekubatanidza, asi nhasi tiri kuzotaura newe nezve yakakosha imwe, ndiyo yakavhurwa sosi chirongwa Apache Guacamole, inova mutengi (HTML5 webhu kunyorera) inokwanisa kukupa iwe zvishandiso zvekuwana kure kure kumaseva uye mamwe makomputa ari kure kubva chero kupi kungori nerubatsiro rwekubatana uye newebhu browser.
Izvo hazvitore zvinopfuura izvo, ingori Guacamole uye wakanaka kuenda. kuwana kure. Uye kuzviwana zvakapusa, sezvo zviri zvemahara, uye zvakare mahara. Uye zvakare, sezvavanotaura kubva ku webhusaiti yepamutemo yeprojekti, Inogona kutsigira zvakajairwa protocols seVNC, RDP, uye SSH (yakawedzerwa gare gare). Kunyangwe ndataura kuti mutengi, muchokwadi inogona kudomwa se "isina vatengi" sezvo isingade plugins kana imwe software ...
Uye zvakare, pawebhu iyo yandakabatanidza iwe unowana rumwe ruzivo rwakawanda nezve chirongwa, pamwe neiyi link yekuona iyo kodhi paGitHub, zvinyorwa, rubatsiro, uye kurodha nzvimbo. Iwe unogona kunyange kuwana yakakwana wiki Vasai kana uine kusahadzika nezve software iyi uye mashandisiro ayo Uye kubva kuLxA ndinokukurudzira kuti uzviedze seimwe nzira kune mamwe mapurogiramu aunoshandisa nhasi, akadai seTeamViewer, TightVNC, UltraVNC, RealVNC, Vinagre, Xrdp, Viubo, uye yakareba nezvimwe, sezvo paine dzimwe nzira dzakasiyana dzakasiyana mapuratifomu.
Nenzira, kana iwe usingazive zvibvumirano kutaurirana kwandakaunza mundima yechipiri, ingoti VNC inomirira Virtual Network Computating, RDP inomirira Remote Desktop Protocol uye SSH inomirira Yakachengeteka Shell. Iwo matatu maprotocol ane akafanana mashandiro asi aine akasiyana hunhu. Semuenzaniso, SSH, sezvaungave uchifungidzira kubva kuzita rayo, inochengetedzeka nekunyora kubatana. Kunyangwe zvirokwazvo uchitovaziva, kana ini ndikasakurudzira iwe kuti utsvage ruzivo nezve ivo, nekuti hazvina basa muchinyorwa chino kuzvitsanangura zvakadzama ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » Apache Guacamole: shandisa komputa yako kubva chero kupi
Ubuntu Budgie kutsvaga yepamutemo logo uye Wallpaper
Kubudirira VI kuri pakupedzisira kuuya kuLinux uye Steam